Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Wuxuu Galay Xaalad Daganaan La,aan ah – Rasaasa News
Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Wuxuu Galay Xaalad Daganaan La,aan ah
Jijiga – May 30, 2018 Kacdoon baahsan ayaa ka socda degaanka Soomaalida Itoobiya muddo labo bilood ah. Kacdoonkan oo lid ku ah madaxa Ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Dadku cabashooyinka waxay la aadaan dhinaca dawlada dhexe.
Dadku waxay aad uga cabanayaan, cabsi badan iyo caga juglayn uu maamulku ku hayo, cabasho la,aan aanay cid loo cawda jirin, xadhig aan xad lahayn, jidh-dil xanuun badan, gacan-dhaaf, gogol-dhaaf, dil iyo waxyaabo murugo leh, ayaa laga sheegayaa degaanka Soomaalida.
Dadku waxaa kale oo ay ka cabanayaan cidhiidhi dhaqaale, canshuuro badan oo aan sharci ahayn iyo in ilihii dhaqaalaha dad gaar ah la naas-nuujinayo. Mammulka iyo awooda degaanka waxay gacantiisa ku ururtay madaxwaynaha qoyskiisa.
Cabashooyinka kale waxaa ka mid ah; ku tagrifalka hantida ka dhaxaysa dadwaynaha, taas oo uu maamulku si aan gabasho lahayn ugu maal-galiyo xigtatiisa sida ay cabashooyinku leeyihiin.
Cabashooyin kale ayaa leh wax sharci kama jiro degaanka Soomaalida Itoobiya, sharciga waxaa leh madaxwaynaha iyo jabsintiisa hoose, oo ku tamashleeya hantida dadwaynaha.
Cabashooyinkan oo marar badan soo noqnoqda ayeyna dwlada dhexe dhag-jalaq u siin amaba ayna awood u lahayn in ay wax ka qabato.
Maamulka Degaanka Soomaalidu wuxuu si toos ah u hoostagaa Ciidamad milatariga, waana sababtaas mida ayna dawlada dhexe uga hadli karin.
Degaanka Soomaalida oo ay Itoobiya odhan jirtay waa meel colaadeed, lama gaadhsiin karo awooda xukuumada dhexe iyo ku dhaqida shuruucda dalka. Dawlada dhexe marar badan waxay ku celcelisay in degaanka Soomaalidu uu nabdoon yahay. Sidaas oo ay tahay ayeyna hadana dawlada dhexe wax talaabo ah hore ugu qaadin degaanka Soomaalida, taasina waa sababta keentay cabashooyinka.
Haddii awal hore dagaanka Soomaalidu ahaan jiray mid colaadeed, maanta oo uu yahay mid nabdoon, dadku waxay leeyihiin waa mid cadaalad daro hadhaysay oo laga cararayo.
Dadku waxay leeyihiin waxaa nalagu siidaayey ciidamo maleeshiya oo hubaysan oo aan sharci iyo nidaam dawladnimo midna garanaynin, balse garanaya uun dhac, kufsi, xadhig iyo dil.
Arimaha yaabka leh ee ay dadwaynuhu sheegayaan waxaa ka mid ah; in dalka Itoobiya gudihiis ay muwaadiniintu magangaliyo siyaasadeed ku heli karaan, iyada oo ay hal dawlad dalka maamusho.
Waxaad ka soo carari Degaanka Soomaalida waxaadna amaan ku heli Addis Ababa iyo Dire Dawa. waxaa kale oo jirta in safaarad Itoobiya ee dibada ay ku siiso vissa sharci ah, laakiin aadan ku tagi karin degaanka Soomaalida in aad xidhiidh la samayso mooyee. Arintani waxay ka mid tahay waxyaabaha cajiibka iyo cadaalad darada lagu dhaqo dadka Soomaalida ah.
Oil in Ogaden: Chinese Company Strikes Oil, Additional Gas Reserve
Cigiyigii Waa ka Baryey Ninkii Cunay Baa ka Liita!